सम्पादकीय: शिक्षामा पहुँच पुर्याउ « Phidim Today
Published on: 17 October, 2019 7:29 am
‘लेकका हामि केटाकेटी, कुहिरो भित्र स्कुल छ, चौँरीलाई चराउँदै दिन बित्छ, पढ्नु र लेख्नु मुस्कील छ ।’
यो गीत निक्कै धेरैले सुनेकोमात्र हैन निक्कै गहिरो भावको खोपेर बनेको समेत छ । यो गीतले मर्ममात्र बोल्दै बाध्यताको चरम निर्र्ममता चित्र समेत मथिङ्गलमा उतार्न बाध्य बनाउछ । यस्तै कहानी हाम्रो समाजमा पनि छ ।
उच्च पहाडी क्षेत्रमा गोठ पाल्ने चलन छ । लेकाली क्षेत्रमा पातला बस्ती छन् । यहाँका नानीहरुलाई पढ्नका लागि सकस छ । विद्यालय टाढा छ । समाजिक रुपमा शिक्षा प्रतिको जागरुकता गराउने भन्दा पनि पशुपालन र कृषितर्फको मानसिकता सृजना गरिदिदा नानीहरुको पढाईमा सकस छ ।
लेकका असजिलो भुगोलमा नानीहरुलाई विद्यालय निक्कै टाढा पर्छ । कक्षा–१ मा पढ्ने नानीले एक घण्टा धाएर कसरी पढ्न सक्छ । यसले ग्रामिण लेकाली क्षेत्रका नानीहरुको शैक्षिक स्तर कसरी सध्रिएला ? लेकका नानीहरुलाई पठन पाठनका लागि एकदमै समस्या छ । एकातीर कम जनसंख्याका कारण विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन् । अर्को तर्फ विद्यालय पुग्न निक्कै टाढा पर्छ । यि कारणले नानीहरुको पठाई विग्रिएको देखिन्छ । विद्यालय छाडेर गोठाले जिवनतीर लागेका स्कुल उमेरका नानीहरु प्रसस्त भेटिने गर्छन ।
यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक छ । लेकका नानीहरुले कहिलेसम्म यस्तो दुख पाउने । सरकारले कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्च गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसले लेकका नानीहरुको शिक्षा थप कष्टप्रद बनाउने अवस्था छ । जनसंख्यानै थोरै छ कहाँबाट पर्याप्त विद्यार्थी ल्याउने ? यहाँ भएकमा विद्यालयपनि मर्च गर्ने हो भने थप समस्या सृजना हुन्छ । लेकका नानीहरुलाई खाजा सहित विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । विद्यालय गएका विद्यार्थीहरुको पनि शैक्षिक उपलब्धि तेती राम्रो देखिदैन । शैक्षिक सुधारका लागि पहल हुन आवश्यक छ । शिक्षा को अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो । आजका नानीहरुलाई शिक्षामा केन्द्रीत गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा पनि दुख पाउने अवस्था छ । नेपालको शैक्षिक नीति स्थान सापेक्ष हुन नसक्दा पनि समस्या देखिएको पाईन्छ । लेकका नानीहरुलाई नियमति विद्यालय जाने, पढाई सुधार्नेमात्र हैन राम्रा विद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन का लागि प्रयास हुन आवश्यक छ । सरकारी र नीजि क्षेत्र यसतर्फ पहल कदमि बढाउन आवश्यक छ ।